Ny milina HEIDELBERG ENINA FOLO PRINITING Machine, JAPAN KOMORI FANORENANA FANORENANA FANAHY EO ny fiantohana ny kalitaonay. Ny fitaovana dia manohana mafy ny vidin'ny mpifaninana.
Hikiry amin'ny fitsipiky ny "fiaraha-miasa mandresy fandresena",fanajana ny fifanarahana sy fanajana ny teny fikasana,ary fiaraha-miasa amin'ny namana na ao an-trano na any amin'ny sambo.
Raha liana amin'ny zavatra rehetra amin'ny vokatray ianao, Aza misalasala mifandray aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa ary tongasoa anay hitsidika ny orinasanay.
Size Araka ny fepetra takian'ny Mpanjifa manokana
pirinty natao tamin'ny 1C-4Colours / fanontana offset
Taratasy Art 128GSM - 400GSM
Taratasy mahafinaritra 110GSM - 230GSM
baoritra 800GSM, 1000GSM, 1200GSM, 15001800gsm gsm
Insert EVA, Sombina sy landy. Velvet, baoritra, Plastic
vita Embossing, Lamination mamirapiratra, Matt Lamination, UV Coating, Hot nohomboana
Fonosana Ny vokatra dia fonosin'ny baoritra fanondranana mahazatra na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa
Fotoana fitarihana santionany 3 andro ho an'ny santionany banga, ao anatin'ny 7 andro ho an'ny santionany vita pirinty
MOQ 1000PCS / famolavolana
1, Fanontana offset(Fanontana CMKY)
2, Fanontana amin'ny lamba landy
3, Fametahana foil mafana(Fametahana volafotsy / volamena)
4, Fanontam-pirinty UV Spot ary fanontana effets manokana
1) Serivisy OEM / ODM
2) Fast & Fandefasana mora vidy
3) Ny filaharan'ny vokatra afangaro dia mankafy ny vidiny fihenam-bidy ihany koa
4) Avelao ny fanovana kely ho an'ny fonosana, endrika na loko
5) Omeo kalitao tsara, serivisy finamanana, valiny ara-potoana ho an'ny fanontanianao rehetra.
1.amin'ny 15 taona manan-karena traikefa, Ouhai Fanontana dia iray amin'ireo mpitarika ny fanontana sy ny fonosana;
2. Ny vidin'ny fifaninanana indrindra, 20% fihenam-bidy amin'ny vidin'ny fandefasana an-dranomasina, ary 30% fihenam-bidy amin'ny fandefasana entana amin'ny alàlan'ny
3. Ny fitaovana mandroso indrindra, ny ora fanaterana haingana indrindra, ary ny fomba fanamboarana entana mahazatra indrindra;
4. Ny vokatra rehetra dia nandalo fanaraha-maso kalitao alohan'ny fandefasana eo ambany fifehezan'ny ekipanay QC mahay;
5.24 serivisy an-tserasera ora maro, ny ekipa mpivarotra anay tontolo andro dia miaraka amina valiny haingana sy matihanina.
Guangzhou Ouhai fanontana Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny fonosana sy ny serivisy fanontana miaraka amin'ny mihoatra ny 10 taona niainany. Ny vokatra lehibe ataontsika dia harona taratasy, boaty taratasy mivalona, boaty henjana. Amidy any an-trano sy any ivelany ny vokatray, toa an'i Azia, Amerikanina sy Eropa.
1. Hamarino sy isao tsirairay, hahazoana antoka fa ny boaty tsirairay azonao dia tonga lafatra.
2. Fonosy 10pcs amin'ny sarimihetsika miaro. Manampy ny entana ho madio izany mandritra ny fitaterana.
3. Ny fitaovana baoritra tsirairay dia K = K mihombo, tsy mihoatra ny 20kgs ny lanjany
4. Manampia sticker amin'ny boaty tsirairay, mampiseho ny habetsaky ny boaty tsirairay, haben'ny vokatra
5. Kitapo baoritra misy paleta hazo / plastika raha ilaina izany
Q1: Mandra-pahoviana aho no afaka mahazo boaty fonosana mitafo fanonta ?
Ao anatin'ny 12 ora maro aorian'ny ataontsika mazava tsara ny takiana. Raha maika, azafady miantso anay amin'ny fotoana rehetra.
Ny MOQ dia 1000 pcs, raha mila santionany hijerena kalitao, 1azo ekena ny pcs.
Q3: Ahoana no fomba ahazoako santionany hijerena kalitao?
Rehefa voamarina ny antsipirian'ny vokatra, sarany santionany, handefa santionany ao anatiny izahay 3 andro.
Q4: Manaiky OEM / ODM ve ianao?
Tongasoa antsika OEM ODM. Ny bobongolo vaovao dia hosokafana araka ny sary famolavolana, habe, ara-nofo.
Q5: Ahoana ny amin'ny fotoana itarihana ny filaminan'ny be sy ny maro?
Ho an'ny entana, ny fotoana fanaterana dia 3-5 andro. Ho an'ny bobongolo vaovao, ny fotoana famokarana dia 30-40 andro.
Q6: Ahoana no amonosanao entana?
Amin'ny ankapobeny, manangona entana amin'ny sombin-javatra izahay & Carton. Afaka manao fonosana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa koa.
Q7: Inona ny fe-potoana andoavanao vola?
Manaiky ny T / T izahay, Paypal, West union, Fiantohana ara-barotra LC sy Alibaba. ary 30% apetraka alohan'ny handaminana baiko, 70% fandoavam-bola mandanjalanja alohan'ny entan'ny sambo.
Fonosana famonosana kapa sandoka mora vidy